अन्तरबार्ता – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमाडौ । श्रीमान विदेशमा थिए । घरमा श्रीमती र दुई छोरी थिए । कहिले काँही घरमा आउँदा श्रीमतीले लुकेर अरुलाई फोन गरेको श्रीमानले देखेका थिए । श्रीमतीको मोवाइलमा अरुले नै रिचार्ज गरिदिएका हुन्थे । कसले मोवाइलमा रिचार्ज गरिदिन्छ भनेर प्रश्न राख्दा मलाई रिचार्ज गर्ने मान्छे थुप्रै छन् भनेर भन्ने गरेकी थिइन् । यो घटना दागंको हो । श्रीमान विदेश जानु अघि निकै साधारण भेषभूषा गर्ने श्रीमती श्रीमान विदेशवाट आएपछि भने उनको स्टाइल पनि निकै फरक भएको श्रीमानले बताएका छन् । श्रीमतीले अरुसंगै फोनमा ब्यस्त हुन थालेपछि भएको सामान्य विवाद पछि उनको श्रीमती २ छोरी लिएर हराएकी छन् । विवाद एक महिना अघि भएको थियो । तर एक महिना पछि उनले म दिदीको घरमा जान्छु भनेर राम्रैसंग श्रीमानसंग विदा लिएर उनी छोरी लिएर गएकी थिइन् । असोज १ गते उनी दिदीको घरमा जाने भनेर गएको बताएका छन् । उनी विदेशवाट आएको एक वर्ष
कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणमा फेरी आउने परराष्ट्रमन्त्रीको सनस;नीपूर्ण खुलासा (भिडि,यो सहित)
एमसीसी कार्यान्वयन हुन्छ, भारतसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ – परराष्ट्रमन्त्री काठमाण्डौ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी संशोधनसहित संसदबाट अनुमोदन हुने दावी गरेका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले संसदको आगामी अधिवेशनबाटै एमसीसी अनुमोदन हुने बताएका हुन् । विगतमा विवाद भए पनि संशोधनसहित अनुमोदन गराउने विषयमा विवाद नभएको मन्त्री ज्ञवालीको जिकिर छ । मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगको नक्सा तथा सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । चीनसँग भने कुनै पनि विवाद र विमति नरहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ । उनले सरकारको आलोचना गर्न आवश्यक नभएको भन्दै राम्रो काम गरिरहेको दावी गरेका छन् । संविधान दिवसका दिन दिन प्रदान गरिएको विभिन्न सम्मान उचित व
Posted in अन्तरबार्ता, भिडियो, मनोरंजन
काठमाण्डौं- केहि समय देखि नेपाली गीत संगीतमा भाइरल भएकी बाल गायिका कमला घिमिरे फेरी मिडियामा आएकी छिन।लामो समय पछि उनि मिडियामा देखिएकी हुन्।आफ्नै नया गीतमा आवाज दिएकी कमलाले सुटिङ्गमा दोहोरी खेल्दै मिडियामा आएकी हुन्।सानो उमेरमै दोहोरी खेलेर करोडौको मन जित्ने उनि एक हुन्। कमलाको प्रगतिमा सबैको साथ् छ सोहि क्रममा चर्चित गायक राजु परियार र उनि बीच अन्तरबार्तामै दोहोरी चलेको छ।उनीहरु बीच लाइभ दोहोरी चलेको हो। कमलाले आफुले चिया छानेको पछिकै आस गरेको गीत गएको बताएकी छिन,उक्त गीत निकै महँगो लगानीमा सुटिङ्ग भएको हो। केहि समय देखि नेपाली गीत संगीतमा भाइरल भएकी बाल गायिका कमला घिमिरे फेरी मिडियामा आएकी छिन।लामो समय पछि उनि मिडियामा देखिएकी हुन्।आफ्नै नया गीतमा आवाज दिएकी कमलाले सुटिङ्गमा दोहोरी खेल्दै मिडियामा आएकी हुन्।सानो उमेरमै दोहोरी खेलेर करोडौको मन जित्ने उनि एक हुन्। कमलाको प्
Posted in अन्तरबार्ता, पत्रपत्रिका
नेपालमा लामो समयदेखि भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै लोकप्रिय बनेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल यसै साता सकिएको छ। वर्षौंसम्म घाटामा चलेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएका घिसिङलाई अर्को एक कार्यकालका लागि नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमात्रै नभएर सडकबाट समेत उठिरहेका छन्। तर यस विषयमा सरकार कुनै टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन। कसैले नचिताएको काम गर्न सक्षम व्यक्तिलाई थप अवसर दिइनुपर्नेु कतिपयको भनाइ छ। अर्कोतिर व्यक्तिभन्दा थिति बसाल्नुपर्ने हुँदा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने गरी प्राधिकरणको बागडोरको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने आवाज पनि छ। यसै विषयमा घिसिङसँग बीबीसी संवाददाता सञ्जिव गिरीले गरेको कुराकानी: आफ्नो चार वर्षे कार्यकाललाई तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? कार्यकालको समीक्षा मैलेभन्दा पनि आम जनसमुदाय र मेरा कर्मचारी
काठमाडौं । केहि दिन अगाडि सानी ४ बर्षकि नानीले आफनो बर्ष दिन पनि नपुगेकाे भाइलाइ काखमा लिएर खेलाइरहेकाे भिडियो भाइरल भएको थियो । बच्चा जन्माउने क्रममा बिरामी परेकि आमाकाे पैसाकाे अभावमा राम्रोसँग उपचार गर्न नसकेपछि सुत्केरीमा छोरा जन्माएर श्रीमान सहित प्यारी छोरीलाइ छाडेर परलोक भइन । त्यसपछि श्रीमान बीरबहादुर माझी एक्लिए । बीरबहादुरले दिनमा काम नगरि बेलुकि खाना घरमा पाक्दैन थियो । यसैक्रममा बीरबहादुरले पेङ्टिङ्ग कामका लागि जाने र घरमा ४ बर्षकि छोरी शितलले भाइ हेर्ने, तरकारी काट्ने, भाँडा माझ्ने, भाइकाे कपडाहरू समेत धुने जस्ता एक परिपक्व महिलाले जस्तै काम गरेकिछिन् । आमा नभएपछि एक्लिएकि शितलले सकेकाे भन्दा धेरै घरकाे काम र भाइकाे स्यहारसुसार गरेकाे भिडियोले नेपालीहरूकाे मन अवस्य छोएकाे हुनुपर्छ । यसै क्रममा केहि समय अगाडि बिवादित बनेकि बाल केयर होमकि सञ्चालिका पुष्पा अधिक
मृगौला पिडि,तलाइ ५ रूपैयाँमा खान बेच्ने कुमारले बुझाए यति धेरै रकम , पैसा बुझाउदा भाबुक भइन पिडित बुनु (भिडियो सहित)
Posted in अन्तरबार्ता, भिडियो, स्वास्थ्य/ जीबन शैली
मृगौला पिडि;तलाइ ५ मा खान बेच्ने कुमारले बुझाए यति धेरै रकम , पैसा बुझाउदा भाबुक भइन पि;डित बुनु (भिडियो सहित झापा ,दमक । केहि समय आगाडी झापाको दमकमा ५ रुपैयाँमा सादा खाना र १० रुपैयामा मासु खाना पेटभरि खुवाउने कुमार राइ सामाजीक सेवामा तिब्र गतिमा लागेका छन् । उनीहरुले भोकाएका मानिसलाई शुद्ध खाना खुवाउने र खाना खाएका ग्राहकहरुबाट संकलित रकम मिर्गौलाको समस्याबाट पीडित २५ बर्षिय एक युवाको उपचारका लागि खर्चिने अभियान चलाएका थिए ।इलाम चुलाचुली ५ का २५ बर्षिय शुकराज लिम्बुका दुवै मिर्गौला खराब भएपछि उपचारमा आर्थिक सहयोग जुटाउने उदेश्यले ५ रुपैयाँमा एक छाना भात खुवाउने अभियान चलाइएको थियो । सहयोगी दाताहरुले खाना खाएर दिएको पैसा कुमार राइले दुवै मिर्गौला फेल भएर उपचार गर्दै गर्नु हुने बिरामीलाई काठमाडौँ पठाईदिनु भएको छ । हाल केहि कारणले गर्दा यो काम रोकिए पनि कुमार राइ समाज सेवाको का
शान्तिश्री दिदिबहिनी एकसाथ मिडियामा : शान्तिश्री भन्दापनि बहिनिले मिठो गाउछिन् ( भिडियो सहित कुराकानी )
शान्तिश्री दिदिबहिनी एकसाथ मिडियामा : शान्तिश्री भन्दापनि बहिनिले मिठो गाउछिन् ( भिडियो सहित कुराकानी ) काठमाडौ / ‘बोल माया’ पछि ‘गलबन्दी’ गीत गाएर शान्ति श्री परियार दर्शक तथा श्रोतामाझ लोकप्रिय बनेकी छिन् । शान्ति श्री सँगै उनकी बहिनी ज्ञानु परियार पनि राम्रो गीत गाउँछिन् । उनले हालै तीज गीत गाएकी छिन् । दिदिबहिनीको स्वरमा यो बर्षको तीज कोसेली ‘फुलमती चनमती’ अहिले जताततै सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ, ‘जस्मा चर्चित मोडेल अञ्जलि अधिकारीले अभिनय गरेकी छिन् । शान्तिश्री कि आफ्नै कान्छी बहिनी ज्ञानु परियार लामो समय देखि सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो नाम पहिचान बनाउन संघर्ष गरिरहेकी बताउँछिन् । दिदिकै प्रेरणाले यो क्षेत्रमा आएकी ज्ञानुको पनि स्वर सुमधुर छ । दिदिबहिनी सँग गरिएको रमाइलो कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् । चर्चित गाएक राजेश पायल राइको नया गीत ‘माथी है पर्‍यो’ सार्
१७ बर्षमा ड्रा,ईभर बनेका भाईको गायकको भन्दा ख,तरा स्वर । गायक बन्छु भन्दै रो,ए (भि’डियो हेर्नुस)
१७ बर्षमा ड्राईभर बनेका भाईको गायकको भन्दा ख, तरा स्वर । सबैले सहयोग गरे, गायक बन्छु भन्दै रो,ए (भिडियो हेर्नुस) (शिशिर भण्डारी) काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ रत्नपार्क रुटमा दैनिक ९७७४ नम्बरको एउटा बस गुड्ने गर्दछ । गायकको गुडिरहेको गाडीलाई नियालेर हेर्ने हो ने एउटा कलिलो ठिटोले बस हुईकाईरहेको देखिन्छ । सानै उमेरमा अनेक ठ,क्कर खाएका मात्र २३ बर्षका बसका चालक, यि हुन्, सुजन बाबु गुरुङ । सिन्धु पाल्चोक जिल्ला मेलम्चीका सुजनले ५ बर्ष भयो, गाडी चलाउन थालेको । हामी बिहान ९ बजे बुढानिलकण्ठ पुग्दा उनी एक टिप गरेर हामीलाई पर्खी बसेका रहेछन् । निकै इमान्दार, नरम स्वभावका सुजनसंग एउटा लुकेको कला छ, उनी सुमधुर स्वरमा गीत गाउंछन् । उनको ठुलो सपना छ,गीत रेकर्ड गर्ने अनि सबैले चिन्ने गायक बन्ने । उनको सपना बुझेर मैले उनलाई एउटा बाचा गरे । सुजनको यो सपना पुरा गर्न तपाई सबैको साथ पाए, हामी पक
काठमाडौं– सुरुमै पी’डित पक्षले आग्रह गरे– यो ठेगाना चाँही नलेखिदिनुस् है, फेरि यहीँ आएर मा’र्लान् । आइतबार दिउँसो ४ बजे तिर सानो गल्लीबाट छिर्दै केराको गोदामले भरिएको घरको तेश्रो तल्लामा चढेप छि हामी उनको कोठामा पुग्यौँ । वरिपरि तरकारी राख्ने क्यारेट, केही थान डोका छरपस्ट थिए । छेवैमा थियो, फलफुल बोक्ने एउटा पुरानो साइकल । र, भुईमा आफ्ना तीन छोरा सहित ओछ्यान लगाएर सुति रहेकी थिइन्, नितु महतो । ‘मलाई थाहा छैन, हाम्रो शम्भु कहाँ छ,’ श्रीमान्को ह,त्या भएको दुई दिनपछि रुँ’दारुँदा ग’लिसकेको स्वरमै भएपनि उनी बोलिरहेकी थिइन्, ‘ न हाम्रो घर छ, न केही । मेरा तीनटा बच्चा छन्, अब यिनीहरुलाई कसले खान दिन्छ, कसले पढाइदिन्छ ? मलाई मेरो शम्भु चाहिन्छ ।’ पतिको ह,त्या यता उनले केही खाएकी छैनन्। सिर्फ, श्रीमानको न्या’यका खा’तिर चि’च्याइ रहेकी छिन्, जोड-जोडले रो’इरहेकी छन्। ‘म केस ल’डेरै छाड्छु, मेरो श
लफडामा परे भाईरल जन्तरे मामा!, अन्त,रबार्ता बिथोल्दै युट्युबरमाथी कुमारको आ,क्रोश (भिडियो सहित)
Posted in अन्तरबार्ता
नेपालमा सामाजिक संजालको लोकप्रियता र डिजिटल युगमा युवापुस्ताको लगावले धेरै उतारचढाव आईरहेको देखिन्छ । सामाजिक संजाल फेसबुक, टिकटक र युट्युबले धेरैलाई सेलिब्रेटी बनाएर माथी पुर्यायो भने धेरैलाई तल पनि झारेको छ । अझै युट्युबमा त भाईरल गराएर माथी पुर्याउने र फेरि पछार्ने प्रवृति बढ्दै गैरहेको छ । लुकेको प्रतिभालाई उजागर गर्ने बाहानामा कतिपय ब्यक्तिहरु युट्युबले दिने डलरको पछि लागेको पछिल्लो केही घटनालाई हेर्दा प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । यता, टिकटकमा नारायण गोपालको गीत गाएर ‘जन्तरे मामा’को नाममा भाईरल भएका ३८ वर्षिय अमित कुमार राईमाथी पनि लफडा सुरु भएको छ । हामिलाई प्राप्त एक भिडियोमा उनी युट्युबरलाई अन्तरबार्ता दिइरहेका छन् । अन्तरबार्तामा उनी मात्रै छैनन्, उनका अन्य दाजुभाई अर्थात परिवारका ८ जना एकसाथ देखिएका छन् । सबैले सारङी, मादल र सुरिलो स्वरमा थपडी बजाईरहेका छन् । जस्लाई